IFactory yoVavanyo lwePlasitiki yePlasitiki-Ityhubhu yaseTshayina abavelisi boomatshini, ababoneleli
Umvavanyi weRate yokufunxwa kwaManzi ePlastiki
I-Rigid Foam Water Absorption Tester inikezelwe ekumiseleni ukufunxwa kwamanzi kwi-foam eqinile.Iqulunqwe ngolungelelwaniso oluchanekileyo lwe-elektroniki kunye nesixhobo se-hydrostatic esixhotyiswe nge-mesh cage yensimbi engenasici.
XJS-30 Uhlobo lweSampuli Saw
XJS-30 uhlobo isampula isarha: Sisixhobo isampuli ukusika iipleyiti zeplastiki kunye nemibhobho.Iyakwazi ukusika ngokuthe ngqo i-splines ngokobukhulu, kwaye inokwenza ukusika kwangaphambili kwiiplate kunye nemibhobho.
Umatshini woVavanyo lwePlastiki yePlastiki ye-SLY Hollow
I-XBM-100 i-Apparent Density Tester: i-Apparent Density Tester isetyenziselwa ukumisela ubuninzi obucacileyo bezinto eziluhlaza zeplastiki, oko kukuthi, ubunzima ngomthamo weyunithi, kwaye ibonelela ngeeparitha zokupakishwa kwezinto eziluhlaza kunye noyilo lwe-screw extrusion.
I-XBM-100 i-Apparent Density Tester
Umatshini wokuVavanya uMbhobho wePlastiki we-ZBW-3025
I-JZ-200 series interfacial tension meter: Sisixhobo esisebenzisa iindlela eziphathekayo endaweni yeendlela zekhemikhali ukuvavanya umphezulu kunye noxinzelelo oluphakathi kolwelo.
Umatshini woVavanyo lwe-HYL woxinzelelo lwendalo esingqongileyo